China i-keybox-48 Hot Sales Security Key Holder Cabinet fekitari uye bhizimisi | Landwell
Landewell Wall Yakakwira Key Safe Management System Bhokisi rinogona kuona kuchengetedzeka kwemidziyo yemushandisi, isingagone kushandiswa pasina mvumo. Zvese zviitiko zvakanyorwa uye mushandisi anotora mutoro wechengetedzo yemidziyo.
• Inonyatso kuzivikanwa advanced RFID tekinoroji, inoita system zvizere otomatiki
• Girazi reMDCMA kana musuwo wesimbi isina chinhu kuita kuti makiyi ave akachengeteka zvakanyanya
Vashandisi vane mvumo chete ndivo vanokwanisa kuwana kiyi dzakapihwa mune imwe nguva
• Kiyi dziri pasi pekutonga kuburikidza nehardware uye software chaiyo nguva
• Yakabatanidzwa neakawanda masisitimu ekudzivirira
Kuchengetedza makiyi ako
Chengetedza makiyi ako sezvavanodzora kupinda munzvimbo dzakakomba uye nezvinhu zvepamusoro-soro. Kana makiyi akachengetedzwa zvirinani, yako midziyo ichave yakachengeteka kupfuura pakutanga.
Sheet Simbi & Simba Yakaputirwa
Acryic / Simbi Musuwo
KeyTag Mhete dhayamita
KeyTag Mhete Zvekushandisa
Kadhi Reader Kakawanda
125 Khz / 13.56 Mhz (Inesarudzo)
9999 Keytags & Vashandisi 1000
Windows XP vhezheni kana yepamusoro
SQL Server 2012 vhezheni kana yepamusoro
Iyo akangwara manejimendi system ine tekinoroji yazvino kuronga zuva nezuva maKiyi uye zvakakosha. Unogona kuteedzera chinzvimbo chekiyi yega yega kuitira kuti makiyi ese akwanise kugadziriswa zvine hungwaru. Iyo chaiyo nzira yakanaka yekukubatsira iwe kugadzirisa akakosha manejimendi matambudziko. Kubva pane zvakapusa kuchengetedzwa sarudzo kune bhizinesi-nhanho kudzora kwezvinodhura kana zvakaomarara zvishandiso, inopa inonzwisisika uye ine simba nzira yekugadzirisa, kuteedzera uye kurondedzera mashandisirwo ezvinhu akakosha.
i-kiyi bhokisi 48
Pasiwedhi, kadhi yeRFID, kuzivikanwa kwechiso
Nhamba YeKiyi Slot
Makiyi makumi mana nemasere
Kiyi Tag Kakawanda
Chinokosha Tag Material
1.Kuwana ne password, zvigunwe zvemunwe, uye RFID yekuwana kadhi zviri nyore kutora uye kudzosera makiyi.
2. Mvumo manejimendi uye otomatiki anogadzira zvinyorwa zvekutora, zvinoderedza njodzi uye manejimendi mutengo, kugadzirisa basa nekushanda.
3. Girazi reMMAMA kana simbi isina waya kuita kuti makiyi ave akachengeteka.
4. Keys dziri pasi pekutonga kuburikidza ne Hardware uye software, inoshanda zviri nyore.
5. Yakabatanidzwa neakawanda mukana wekutonga.
6. Tora yakazvimirira CPU neFlash, dhizaini-yakavakirwa bhazi dhizaini, yakanaka chitarisiko uye shandisa shoma nzvimbo.
Vanhu vasina mvumo havagone kuwana kiyi.
Kiyi yega yega inongori basa remunhu ane mvumo.
Izvi zvinoreva kurasikirwa kushoma kiyi uye netsaona kurasikirwa kwepfuma.
Vashandisi vane mvumo vanogona kutora uye kutora makiyi chero nguva, zvinoreva kuti vashoma vashandi mari uye kudzikira kutsamira. Nekutarisa nhoroondo yekuwana, unogona kupedzisa kiyi manejimendi.
Iyo sisitimu inorekodha iko kushandiswa kwekiyi munguva chaiyo, ichipa marekodhi ekuwana nemishumo. Nekutarisa yekuwana nhoroondo, iwe unogona kugara uchiwana ruzivo rwechizvino-zvino.
Iyo Sisitimu inoenderana uye inogona kuve yakabatanidzwa mukambani yekuwana kudzora, kuongorora, kupinda, ERP uye mamwe masisitimu kuti awane system network.
Iwe unogona kumisikidza zvirinyore makiyi nesystem software uye uri kure seta mvumo kune vashandisi. Kudzora pamhepo uye mibvunzo inobatsira kudzikisa mutengo uye kuwedzera eflciency.
Iyo Landwell Key Management System inogona kuve yakajairwa kana yakagadzirirwa kuti ienderane nezvinodiwa zvevatengi vakasarudzika. Iyo kiyi module uye module yekuchengetedza inogona kusanganiswa mune imwechete sisitimu.
i-Keybox mazana maviri
Pashure: Wholesale Mutengo China Inokiyiwa Kiyi Kabineti - Kiyi Yekuchengetera Kabhini yakanyanya kutsigira - Landwell
Zvadaro: H3000 Android kudzora mudziyo chengetedzo Cabinet
Encryption Kiyi Management System
Fleet Key Management System, Property Management Kiyi Maitiro, ZveMotokari Key Management System
i-keybox-64 Yakanyanya Kiyi Kiyi Lock kabhineti
i-keybox-16 universal magetsi kabhineti makiyi
hofisi yekutengesa kiyi yekutevera system yakakosha
Hofisi & Hotera Yega Yekushandisa Makiyi Muchina w ...
Landwell akangwara kiyi bhokisi pamusoro chengetedzo manag ...
Inokiyiwa Key Kabineti, Key Management Cabinet, Diki Bhokisi Management System Uye Kiyi, Makuru Makuru Ekuchengetera Cabinet, Iyo Bhokisi Yekudzivirira Kiyi, Yakarembera Kiyi Bhokisi,